काठमाडौँको तारकेश्वरबासीलाई खुसीको खबर ! – Ramailo Sandesh
काठमाडौँको तारकेश्वरबासीलाई खुसीको खबर !
काठमाडौँ,२० जेठ ।
काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकामा ‘एक घर, एक धारा’ अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । काठमाडौँको उत्तर–पश्चिम क्षेत्रमा रहेको तारकेश्वरले सबै नगरवासीलाई शुद्ध खानेपानी पु¥याउने उद्देश्यले ‘एक घर, एक धारा’ अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो ।
उक्त नगरमा गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहमा नगरप्रमुखमा कांग्रेसका महर्जन र उपप्रमुखमा कांग्रेसकै उम्मेदवार सिर्जना बुर्लाकोटी निर्वाचित भएका थिए।